Rules for Writers | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Rules for Writers	Rules for Writers
6. လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ။ မြန်မာပြည်က ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးစုတွေရာနဲ့ချီပြီး အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကို တန်းတူညီမျှစိတ်ထား ရေးကြဆွေးနွေးကြရန်ဖြစ်ပါတယ်
အဓိပါယ်ကင်းမဲ့သော အလာပ သလာပ စာများ၊ နေကောင်းကျန်းမာ မိတ်ဆက်စာများ၊ စာတိုလေးများမရေးကြစေလိုပါ။
ပွိုင့်ပေးစံနစ် (Jan 22 2011)
Number of points for each comment: 10 ( ကော်မန့်တခုအတွက် ၁၀ ပွိုင့်) Number of points for each post: 80 (ပို့စ်တခုအတွက် ၈၀ ပွိုင့်)
Number of points new members get for registering: 400 ( မန်င်ဘာအသစ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၄၀၀ ပွိုင့်) Number of points for “daily” login: 2၀ ( နေ့စဉ် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့ ခြင်းအတွက် တရက် ၂၀ ပွိုင့်)
Points for Link Creation: 40 (မြန်မာနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်တခု ထည့်ပေးခြင်းအတွက် ၄၀ ပွိုင့်)
ကိုယ်တိုင်ရေးစာ မဟုတ်သည်များကို ပွိုင့်ပြန်နှုတ်ပါမယ်။
၁၀ရက်အတွင်း အခြားမန်င်ဘာတဦးဦးထံမှ ကောမန့်တခုမှ မရရှိထားသော စာကို ပွိုင့်ပြန်နှုတ်ပါမယ်။
စာမူတခုအတွက်အနည်းဆုံးရေးရမဲ့ စာလုံးအရေအတွက်ကိုလည်း ၃၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀ ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ စာလုံးရေကို သတိပြုကြစေလိုပါတယ်။ အလွန်အမင်းတိုသော စာမူများ မတင်သင့်ပါ။
အယ်ဒီတာအဖွဲ့ က ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ရွေးချယ်တဲ့စာမူတွေကိုတော့ စာမူတပုဒ် ပွိုင့် ၅၀၀ အထိတိုးမြှင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ မင်န်ဘာများ ကော်မန့်အေ၇းများတာရယ်။ ဖတ်ရှုသူများတာရယ်၊ ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်တာရယ်အပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ပွိုင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပါမယ်။
ကိုယ်တိုင်ရယူထားကြောင်းဝန်ခံချက်ပါတဲ့ (ဓါတ်ပုံပါ)သတင်းကို သတင်းရေးဟန်နဲ့ပြည်စုံတယ်ဆိုရင်၊ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင် ပွိုင့် ၅၀၀၀ ပေါင်းပေးပါမယ်။
မြန်မာပြည် ပြင်ပနေ မန်င်ဘာများ ပွိုင့်ကိုငွေသားအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်ယူခွင့်မရှိ။
ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ရွေးချယ်တဲ့စာမူရှည်များရှိရင်လည်း အဆိုပါစာမူအတွက် စာမူခသီးသန့်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပြီး တပုဒ်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀+ဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိထားတဲ့ ပွိုင့်တွေကို မည်သူ့ကိုမှ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်ရ။
စည်းကမ်းများ၊ပွိုင့်များဟာ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲပါမယ်။ မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ ငွေကြေးရံပုံငွေအပေါ်တည်မှီနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
မန်ဘာများဟာ ၆လဆက်တိုက် ပွိုင့်အပြောင်းအလဲမရှိပဲဖြစ်နေရင် မန်င်ဘာအဖြစ်က ရပ်စဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွိုင့်များလည်း ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဟာ ပိတ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် Top Ten မှာပါတဲ့သူများကိုသာ ရရှိပြီးပွိုင့်များအား ငွေသားအဖြစ် ထုတ်ပေးပြီးပေးလျှော်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွေအလိုက် ဆိုင်ရာဒေသက မြန်မာလှုပ်ရှားမှုသတင်း အများဖတ်နိုင်အောင် တင်ပေးမဲ့ မြန်မာပြည်ပြင်ပနေသူမင်န်ဘာတွေအတွက် စံနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
CNN iReport ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါမျိုး ပုံစံတူလည်း မန္တလေးဂေဇက်မှာ လုပ်ပါမယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာတွေ ထူးခြားတာလေးတွေ့ရင် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်။ အက်ဆေးတိုလေးရေးပြီး တင်ပေးကြဖို့ပါ။ တင်တဲ့သူတွေဟာ CNN iReport လုပ်နည်းဟန်တွေအတ်ုင်းပဲ
(၃) မဟောင်းပဲ ကောင်းတဲ့သတင်းဓါတ်ပုံဖြစ်ရမယ်။ ဆိုတာလေးလိုက်နာပေးဖို့ပါ။ အဲဒီလို ပုံတွေကို သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြဖို့ရွေးရင်လည်း တပုံကို ၅ဒေါ်လာ ချီးမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ..အဲဒီငွေတွေကိုလည်း အပေါ်က ရံပုံငွေထဲ စုထည့်ပေးပါမယ်။
လှူဒါန်းပေးပို့ မှုတွေမှာ အလှူရှင်တွေအမည်နာမတွေနဲ့ ထုတ်ပြန်လှူဒါန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- editor|6139- Hits|
Posted by editor on Jan 31, 2011 in Editor’s Notes, Letter to The Editor | 583 comments
New Member များဖတ်ကြည့်ကြရန်
zawana says: Points for Link Creation: 40 (မြန်မာနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်တခု ထည့်ပေးခြင်းအတွက် ၄၀ ပွိုင့်)
ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာပါလဲ ခင်ဗျာ ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8441
kai says: အပေါ်ညာဖက်ထောင့်က ..Menu > Links ကိုဝင်လိုက်ရင်.. Link Creation မြင်ရပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီမှာ .. လင့်ခ်ထည့်တာပြောတာပါ..။
Thet Aung says: စာလုံးရေ ၇၀၀ လောက်ဆိုရင် သတင်းတပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Thet Aung says: တကယ်တင်မယ်ဆို သတင်းတိုတိုလေးတွေ တောင်ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာ ၃၀၀ တောင်မပြည့်ဘူးလေ။
Thet Aung says: Comment ပေးတဲ့ဘေးလေးက ဂွင်းထဲမှာ +1 တို့+2 တို့ က ဘာလုပ်တာလဲ -1ဆိုရင်ကောဘာဖြစ်လဲခင်ဗျ
လူခါး says: voting ပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ အားလုံးရေးသွားတဲ့ comment တွေထဲက မှန်တဲ့၊ ကောင်းတဲ့၊ သင့်တော်တဲ့ comment မျိုးတွေဆိုရင် + ကို နှိပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ လူသစ်တစ်ယောက်က အဲဒီ post ကို ဝင်ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဘယ် comment တွေက အဖြေမှန်လဲဆိုတာ သိပြီးတော့ အသုံးပြုရတာ ပိုကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် facebook က like နဲ့ အတူတူပါပဲ။ သူများရေးသွားတဲ့ comment ကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် + တစ်ခါနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့ … Log in to Reply	0	Was this answer helpful?LikeDislike 17
Thit San Khant says: ကျွန်တော် ဒီနေ့ ပိုစ်တစ်ပုဒ် တင်မိတာ Crack App တွေ ဖြစ်နေလို့
စည်းကမ်း နဲ့ မညီကြောင်း အကိုတစ်ယောက်က သတိလာပေးသွားပါတယ်
ဒီဆိုက်အကြောင်းကို သိပ်မသိသေးလို့ တစ်ဖြေးဖြေးလေ့လာနေပါတယ်
အမှားပါက ပိုစ်များ ကို သတိမပေးပဲ ဖျက်နိုင်ပါတယ်…
ပြီးတော့ ပိုစ်ရေးတဲ့နေရာတွေမှာ စာသားတွေကို Space ဘား ခြားပေမယ့်
တကယ်တင်လိုက်တဲ့ အခါ အားလုံး ကပ်နေကြတာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဖောင့်က ဇော်ဂျီဖောင့် ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ ဘရောင်ဇာက Google Chrome ဖြစ်ပါတယ်..
အဒ်မင်များ လမ်းညွှန်ပေးပါအုံး ခင်ဗျာ..
Comments By Postစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - မောင် ပေ - ခင် ခနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မောင် ပေ - TTCGလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - Ma Ma - ခင် ခမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Ma Ma - အလင်း ဆက်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - TNA - အလင်း ဆက်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - စနေ - KZSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - Lay Pai -etoneမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ -etone - may july“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - ko pauk mandalay - ခင် ခ“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - ko pauk mandalay -etone``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - ခင် ခ - Ma Maအတု - ခင် ခ - kyeemiteရွာသူ/သားများ အတွက် -etone - ရဲစည်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ -etone - awra-choဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - ခင် ခ - kyeemiteအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - pazflor - ဦးဦးပါလေရာမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - padonmarComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Foreign ResidentEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities